Home / Interior design / Fonenana an-tanàn-dehibe, fandikana ny fiatraikan'ny estetika atsinanana amin'ny fikorianan'ny borosy ｜ Donghe Yipin
2021 / 06 / 22 FisokajianaInterior design 5825 0
DHYP Fandrafetana ny endrika famoronana anatiny
Vanim-potoana fomba fiaina vaovao izay tsy voafaritra
Mifantoha amin'ny tena, mangarahara fa tsy tsy fisian'ny antony
Miaina miavaka tsara, nefa koa maimaim-poana ary tsy voafehy
Mampifaly tena sy manaraka ny fitiavan'ny fony
Tsotra sy madio, tsy voafehy ary mandeha ho azy
Nefa mbola matoky tena sy azo antoka
Ny fiainana tsara dia tsy hitovy
Ny famirapiratry ny fahitana
Fanaparitahana ny hazavana maro loko manome fahalalahana
Miaina ny tena tenanao
Io no fihetsika mahafinaritra indrindra amin'ny fiainana
Samy manana ny fomba fanatonana ny fiainany ny tsirairay.
Ny famolavolana ny habakabak'ilay mpamorona dia toa fitadiavana fiainana bebe kokoa.
Ireo fialamboly, fihetsem-po, asa ary fialan-tsasatry ny tompona, fiainana ara-tsosialy, fahazarana ……
Izy rehetra dia hifandray akaiky amin'ity habaka ity.
Amin'ny lafiny iray, ny habaka dia ny "tena expression" an'ny tompon-trano.
Ny tompon-trano amin'ity tranga ity dia vehivavy manan-tsaina be izay manana tsiro tsara amin'ny fiainana an-trano.
Izy dia manana tsiro tsara amin'ny fiainana an-trano, ny fankasitrahana ny tenany ary ny fitiavana kaligrafizy.
Tiany ny mankafy ny fiainany mangina rehefa afaka sy avant-garde.
Ny fototra niandohan'ny trano dia ny ravaka tsara.
Taorian'ny fiheverana maromaro dia tsy nanova ny firafitra anatiny ny mpamorona.
Fa kosa, ny "hatsarana" no nifantohana,
"Habakabaka" sy "fahatakarana fomba fiaina".
Ny fikolokoloana ara-pihetseham-po dia ampiasaina mandritra ny famolavolana.
Ny ampahany sarotra indrindra amin'ny fifehezana ny fampisehoana manokana dia ny fanesorana.
Te hamorona toerana ahafahan'ny mponina "mahazo aina amin'ny tenany" tanteraka ny mpamorona.
Ny habaka dia maimaika, tsotra ary maimaim-poana.
Izy io dia mikorontana, mangarahara ary mangina amin'ny fahitana.
Tsy misy haingo mihoapampana, manjary manjaka ny atin'ny fiainana, ary mihemotra mankany aoriana ny habaka.
Ny toerana dia ahemotra any aoriana, manambara hatrany ny fahaleovan-tena sy ny fahatokisan-tena, ny hakantony ary ny fitoniana amin'ny fiainana an-drenivohitra.
Miaraka amin'ny tontolo romantika ao an-tsaina sy ny hakanton'ny tononkalo eto an-tany.
Tiany ny mifampiresaka malefaka amin'izao tontolo izao, ary ny mijanona ao an-trano no fanjakana tiany kokoa.
Ny fahendren'ny fiainana
Manome fomba fisainana multidimensional sy madio kokoa ho an'ny famolavolana habakabaka.
Mialà amin'ny rindrina mahazatra, sary sokitra vita amin'ny hazo, malefaka
Ny loko fototra fiainana ambany indrindra.
Ny contour sy ny material dia mifanandrify aminy mba hampanan-karena ny haavon'ny habaka.
Ity no kianja filalaon'ny tompona, ary koa
Izy io koa dia faritra fihaonana ahafahan'ny namana mipetraka eo amin'ny tany amin'ny fotoana rehetra rehefa mitsidika izy ireo.
Ny gauze dia manintona ny fanorohan'ny masoandro avy ao amin'ny efitrano.
Ny greenery ao anaty vazy dia omena heviny tononkalo hafa.
Ny vazy maitso maitso dia omena tendrena tononkalo, mamadika azy ho saha maitso ao an-trano.
Irery ny hariva, misotro kafe irery, mamaky boky hahita izao tontolo izao.
Ny sofa beige tsotra sy toradroa miaraka amina endrika tsy dia milamina sy malaina
Manampy fomba maoderina amin'ny habaka izay tsotra sy tsy mendri-piderana.
Ny sary mihetsika Samsung Picture World Art TV dia mampita atmosfera malalaka sy tsy voafehy.
Ary ny fanovozan-kevitra tsotra notondroin'ny fanaka.
Mameno ny fifandimbiasana sy ny fifandraisan'ny mponina sy ny habaka.
Ilay hanitra poeta manankarena, nipetraka teo ambony taratasy.
Mametraka fihetseham-po ao anaty tadim-bolo.
Mafana, milomano, be fientanam-po, manaikitra.
Eo ambanin'ny lalan'ny maoderina
Fa miafina ao amin'ny estetika atsinanana an'ny borosy ihany koa
Ny fahalianana miala sasatra sy milamina dia maniry ho azy.
Avy amin'ny sary hoso-doko ka hatramin'ny lamba, hatramin'ny rindrina sy ny gorodona.
Ireo fitaovana mihosin-tarehy dia mampanan-karena ny firafitry ny habaka.
Fotsy malefaka, maivana ary mafana, loko hazo, milamina sy milamina.
Eo ambanin'ny hazavana voajanahary be dia be,
Ny fitambaran-loko malefaka dia mitendry gadona mandeha ho azy sy mavitrika.
Malemy sy tony, misokatra ary falifaly.
Ny voninkazo sy ny diloilo dia samy masaka amin'ny afo.
Mamiratra sy mafana tokoa ny fiainana.
Eo amin'ny fahadiovana sy ny hamafiny,
Mitombo ny zavakanto sy ny tantaram-pitiavana ary teraka ny afomanga.
Manomboka amin'ny fotoana isokafanao ny masonao isan'andro.
Ny habaky ny santimetatra rehetra dia tokony ho afa-po 100% amin'ny hatsaranao manokana.
Tsy misy zava-dehibe kokoa noho ny mampifaly ny tenanao.
Ny paleta miloko dia mitohy amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ary miaraka amin'izay koa, ny firaisan'ny habaka
Mamorona rivo-piainana tsy manam-paharoa amin'ny toerana fatoriana.
Ny endrika maivana amin'ny rattan poakaty dia manome ny fahamendrehana mangina sy ny hakamoana.
Ny feo manankarena amin'ny sary hosodoko dia manamora ny monotony entin'ny fotsy.
Toa an'i Tao Yuanming “mahita ny Tendrombohitra atsimo milamina”,
Hita taratra ny fahatsapana ny fiainana andalam-piainana an'ny tompona amin'ny natiora.
Anaran'ny asa: Kafe ao an-tanàna
Orinasa mandrafitra: Design Design Space Space DHYP Donghe
Mpamolavola lehibe: Zhou Chuanlong
Mpamolavola: Gao Xiaotong, Feng Qiu Cheng
Toerana: Jinan Vanke Metropolis
Serivisy amin'ny tetikasa iray manontolo: fividianana fototra, fividianana fanaka malemy
Mpamorona endrika tsy mangina
Mpanorina ny Donghe Yi Pin Space Design
Manokana izy amin'ny famolavolana tena manokana sy mpiaro fa tsy misy fomba fiaina raikitra.
Mino izy fa ny famolavolana dia tokony hiorina amin'ny fandikana ny filan'ny mpampiasa sy ny toetrany, ampian'ireo hatsarana kanto, ary ny endrika anatiny namboarina, mba hampisehoana ireo endrika amam-bika misy hafanana, halaliny sy haavony.
Previous :: 58m2 Famolavolana efitrano malalaka, Fomban'ny Romana «Dite ronono», Fomba Super! Next: Ny traikefa mitambatra amin'ny kolotsaina, fanatanjahan-tena ary raharaham-barotra, fanoritana ny habaka ara-barotra ｜ UHG